उपत्यका व,रिप री ५ लाख पर्य`टक अ`ट्ने प`र्यटन पू`र्वाधा,र तया`र गर्छु -भट्टराई – Gandaki Chhadke Nepal
काठमाडौं । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड,ड्यन मन्त्री योगेश भट्टराईले काठमाडौ उपत्यका व,रिप,री पाँच लाख पर्य`टक बस्न मिल्ने गरी पर्य`ट`न पूर्वाधा`र तयार गर्न नेपाल पर्य,टन बोर्डलाई निर्देशन दिएका छन् । मन्त्रा,लयमा आज नेपाल पर्यट`न बो,र्डका निर्देशकहरुसँगको छलफ,लमा मन्त्री भट्टराईले सार्वज`निक वि`दाको दिनमा उ´पत्य´का वरिपरी पाँच लाख पर्यट`क अ`ट्ने गरी पर्यट`न पूर्वाधार प`दमा´र्ग, साइक´लिङ, ट्रेल प,र्यट`न उप,जको सम्भा´वनाको अध्य´यन गरी मन्त्रा`लयमा प्रतिवे`दन पे´श गर्न नि´र्देशन दिएका हुन् ।
उनले प्रदेशस्त,रमा प्रदेश सरकारसँग सम,न्वय गरी प,र्यटन बो,र्डको शा,खा चाँ`डो गठ`न गर्न समेत निर्दे,शन दिएका छन् । मन्त्री भट्टराईले पर्य`टन बो,र्डलाई सातवटा भा`षा नेपाली,हिन्दी, चाई`निज अर`वी पो`र्चुगल र स्पेनि´स भा´षामा डि´जिटल सामा`ग्री त,यार गर्न आ`ग्र`ह गरे ।
मन्त्री भट्टराईले अना`वश्यक ख`र्च कटौ`ती गरी आर्थिक मि`तब्य`यिता कायम गर्न निर्दे?शन दिएको उनको सचिवा`लयले जनाएको छ । वि`देश तथा स्वदे`शमा हुने भ्रम`ण ख`र्चमा क`टौ`ती गर्न नि`र्देशन दिएको सचि`वालयको भनाइ छ । उनले प´र्यट´न बो´र्डका प´दाधिका`रीहरुलाई कोभि`ड १९ को म`हामा`रीको समयमा भर्चुअल टुरका प्या´केज बनाउन आग्र`ह गदै वि`श्व सम्प,दा, हिमाल,टेकिङ सिमसार,म्युजियम निकुञ्ज लगायतका भर्चु´अल टुरको सा`माग्री तयार गर्न निर्देशन दिएक छन् ।
मन्त्री भट्टराई अहिलेको खोज अनु`सन्धा`न, योज`ना निर्मा`ण रि`र्पोट तथा पर्यट`किय क्षे´त्रका बृ`त्त चित्र लगायत सामा`ग्रीहरु प्रका`शन तथा प्रशा`रण गर्न आ`ग्रह गरे । उनले को`भिडका का`रण पर्य`टन ब्यवसा`यी,प`र्यटन मज`दुर लगा`यतमा देखिएका सम`स्या तथा प`लायन रोक्न मनोसा`माजिक परा`म`र्श सेवा शुरु गर्न पर्यट`न बो`र्डलाई निर्दे,शन दिएका हुन् ।
उनले विभिन्न देशका रहेका पर्यट`न डे`क्सलाई स`क्रि`य बनाई स्वदे`श तथा विदेशमा पर्य`टन क्षेत्रका संघ संस्थाहरुसँग नेट`वक वि`स्तार गर्न समेत आ`ग्रह गरे । कोभिड १९ ले सवै भन्दा बढी अ,सर पर्यट`न क्षे`त्रमा परेका भन्दै मन्त्री भट्टराईले को`भिड पछि पर्य`टन उत्था`नका लागि के के गर्न सकिन्छ त्यसको आव`श्यक योज,ना बनाउन समेत आग्र,ह गरे ।
मन्त्री भट्टराई नेपालमा स्वा,स्थ्य, शिक्षा,खेलकुद पर्यट,नको संभा`वनाका बारेमा अध्य`य`न अनुस,न्धान गर्न आ`ग्रह गरे । छल`फलमा पर्य`टन बोर्डका कार्यकारी नि`र्देशक डा. ध`न्नज`य रेग्मीले आर्थिक बर्ष २०७६।७७ को प्रग,ति र ७७। ०७८ का कार्यक्र`मका बारेमा जान`कारी गराएका थिए । स्रोत रातोपाटि
को,रोनालाई जितेर घर गएका व्यक्तिमा पुनः पोजेटिभ देखियो,नारायणी अस्पतालमा भर्ना …हेर्नुहोस!
मैले कहिल्यै पनि कुर्सीका लागि राजनी,ति गरिन :माधवकुमार नेपाल
<> ज्ञानेन्द्र शाहीमाथि कु’टपिट गरेको आ’रोपमा १ जना प’क्राउ